Samsung ichaisa skrini hombe mumoyo weMadrid | IPhone nhau
Samsung ichaisa skrini hombe mumoyo weMadrid
Pasina nguva refu takaziva kuti Samsung yainge yafunga kuisa hofori poster ine Samsung Galaxy S7 Edge muMoscow, zvisinei, zvinoita sekunge rudzi urwu rwekusimudzira kukuru neSamsung mumakuru makuru eEuropean, harina kuita zvakawanda kutanga . Nhanho inotevera ndeye chidzitiro chema inchi mazana maviri (hongu, chiuru chimwe nemazana mana) muguta guru reSpain. Mune chimwe chezvivakwa chinotungamira kune inozivikanwa Plaza Callao, ino hombe skrini ichaiswa iyo inonzi inoteedzera iyo Samsung Galaxy S7, kunyangwe isu tichifungidzira kuti inozove yekupedzisira isiri chinhu chinoshamisira skrini, senge chero chimwe.
Isu tinokusiya iwe pazasi kuti iyo skrini / poster iyo iriko parizvino iri muMoscow inotaridzika sei, iyo pakutanga pekutaridzika inoita kunge yakati kurei zvishoma pane iyo yanga iri muMadrid.
Tiri pakati pekushambadzira mushandirapamwe, Munguva yeSpanish King's Cup Yekupedzisira taigona kuona maviri maApple ads kusimudzira iyo iPhone 6s, yekutanga munguva yekuzorora, kuzivisa kusetsa kweCookie Monster yekubika yavanofarira, uye yechipiri ichitarisa mumwe wevatambi ve Kusangana Kwandakaita Naamai Vako. Zvakajairika kuti mishambadziro yekushambadzira iwedzere pamazuva aya, nekuda kweKisimusi hangover, kune vashoma vanotsvaga kuwana zvigadzirwa zvepamusoro zvetekinoroji, saka vanofanirwa kuita kaviri kuita kuti vatengese.
Sezvo isu tese tichiziva, Madrid ndiyo inonyanya kuratidza yeApple Chitoro, asi Samsung yaona zvakakodzera kusaisa screen muPuerta del Sol (pane Apple Store). Nekudaro, panguva yese yeKisimusi akange atochengeta chikwangwani chihombe chakatarisa kuApple Store muSol.Zvinoita kunge vashambadziri veSamsung havasi kugona kurara vasina kurota apple rakarumwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » Samsung ichaisa skrini hombe mumoyo weMadrid